Banky Offshore - Ahoana no hanokafana ny kaonty tsara indrindra ho anao
Offshore Banking Guide | Ahoana no hanokafana ny kaonty Best
Banky Offshore dia ny fanokafana kaonty banky ivelan'ny firenena iray mitoetra ao. Manokatra ireo kaonty ireo ny olona noho ny antony maro samihafa. Anisan'izany ny fiarovana ny fananany amin'ny fampanoavana, mpampindram-bola sy fitsarana, ary koa ny tahiry ny hetra sy ny fanitarana orinasa. Manavao hatrany ity lahatsoratra ity isika. Ny tanjonay dia ny hanome anao ny torolàlana tsara indrindra hiresahana momba ny fomba, aiza ary ny antony Manokatra kaonty banky offshore. Miresaka momba ny lalàna sy famaritana ary dikany koa isika. Hodinihintsika ny fototry ny fampahalalana efa mandroso ao amin'ny free online book online dia ho hitanao eto ambany.
Ny serivisy momba ny banky any amin'ny tontolo tandrefana dia ratsy endrika. Zava-misy izany. Ity no misy Global Finance hoy, raha ny momba an'ity fanoratana ity, amin'ireo banky azo antoka indrindra 30 eto amin'izao tontolo izao. tsy misy tany Etazonia no nipetraka. Aotra. Any amin'ny 50 ambony indrindra ihany dimy ny rafi-bola ara-bola dia tany Etazonia. Fanampin'izay, ny efatra amin'ireo banky dimy amerikana ao anaty lisitra dia banky fiompiana tantsaha kely fotsiny. Enina ny isa AAA offshore banks. Amin'ny enina, tsy misy ireo dia tany Etazonia.
Banky any ivelany: Torolàlana feno.
Etazonia: Deep in Debt
Mieritrereta kely an'io. Ny USA no firenena be trosa indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy misy firenena manakaiky akaiky azy. Amin'ireo firenena efatra misy ny vesatra trosan'ny trosa lehibe indrindra, dia indroa ny trosan'ny Etazonia roa ary roa sy tapany mihoatra ny isa sy efatra any Frantsa sy Alemana.
Raha ny lohateny etsy ambony dia tsy lohateny mahaliana loatra io. Fahamarinana madio miorina amin'ny porofo marim-pototra izany. Ambonin'izany, tsy ela akory izay, ny US dia nidina tamin'ny famerenam-bola amin'ny Standard & Poor's, ilay masoivoho ambony indrindra amin'ny andrim-panjakana sy ny soatoavin'ny governemanta eran'izao tontolo izao. Ny olona amerikana dia tsy manana lalàna ao amin'ny tany niaviany mandrara ny banky any ivelany. Ka mba hanombohana na hahazoana fampahalalana misimisy kokoa dia azonao atao ny mampiasa ny endrika consultation na miantso ny laharana amin'ity pejy ity. Mandritra izany fotoana izany, Jereo ny torolàlana etsy ambany.
New ny offshore accounts? Mila manimba ny fahazoanao azy? Te-hanokatra kaonty any ivelany ianao? Ny torolàlana eto ambany dia torolàlana. Manome fampahalalana feno ho an'ny rehetra hanombohana sy hanamafisana ny fahalalanao.
Torolàlana ho an'ny Banky Offshore & Free Book
Toko 1: Banky Offshore Bank: Inona ity? Nahoana no misy?
- Information vaovao, torohevitra ary fomba
Toko 2: The 5 tsara indrindra Manokatra kaonty Banky Offshore - Manondraka azy
Toko 3:Banky iraisam-pirenena
Toko 4: angano
Toko 5: Security & Security
Toko 6: Asset Protection
Toko 7: 6 Best Countries- Lisitry ny Banky Offshore of Jurisdictions
Toko 8: Fananganana kaonty eny am-pandrosoana Ny hatao
Toko 9: Kaonferansa mpivarotra karatra
Toko 10: vola lany
Toko 11: Fitsarana ara-dalàna
Toko 12: Banky Swiss
Bonus Chapter: Bitcoin ary ny Cryptocurrency hafa
Ny olana momba ny Banky Amerikana
Aleo mifantoka bebe kokoa amin'ny rafitra banky any Etazonia.
Ny sasany amin'ireo mpiady amin'ny banky taloha any Etazonia dia tsy mametra ny fenitry ny fiarovana ny banky. Bank of America Corporation, ohatra, vao nampandrenesina vao haingana fa tsy nandalo ny fitsapana ny adin-tsaina. Ny fitsapana dia namarana fa ny banky dia 33.9 miliara dolara dolara fohy amin'ny habetsahan'ny tahiry ilain'izy ireo hitazomana ny fahasahiranana roa taona.
Na ny masoivoho izay tokony hiantoka ny banky amerikanina aza, ny FDIC ny tenany dia lavitra loatra. Tsy manana ny habetsaky ny vola takian'ny lalàna izy ireo mba hananana antoka amin'ny rafitra banky amerikana.
Ankoatra izany, ny US Federal Reserve dia manidina amin'ny ranomandry manify. Ny tahan'ny renivohitra izay mitazona dia 1.24% paltry. Mieritrereta kely an'io. Lehman Brothers dia tao amin'ny 3% rehefa namoaka ny fangatahana trosa izy.
Tamin'ny fanombanana natao vao haingana, dia nisy trosa trosa 50.7 trosa izay trosan'ny tompon-trano sy orinasa ary governemanta amerikana. Ity dia 3.5 manelingelina ny vokatra isan-taona ao an-tokotanin'i Etazonia manontolo.
Banky rafitra ao anatin'ny olana
Noho izany dia mazava fa ny Etazonia dia manana rafi-bola fantsom-bola be ambanin'ny fanambadiana atolotry ny fikambanam-piantohana manantona volafotsy iray izay tohanan'ny vondrom-piarahamonin'ny governemanta izay trosa be, izay tohanan'ireo mpandoa hetra. Noho izany, tsy tokony hanontany isika hoe, "Milamina ny banky any ivelany ve?" Fa kosa, tokony hanontany isika hoe, "Milamina ve ny banky amerikana?"
Azontsika atao ny mahita indray, fa ity dia tsy hoe hyperbole fotsiny. Fahamarinana matanjaka mifototra amin'ny zava-misy taorian'ny zava-misy. Tena fahatsapana mampihetsi-po mahatsiravina izay mipetraka toy ny vato ao amin'ny lavaky ny vavony.
Efa Nisy Namitaka ve Izahay?
Hitanay ny ray aman-dreninay nankany amin'ny banky, nametraka ny volany vola tao amin'ny banky, ary azo antoka fa azo antoka ny banky. Mazava ho azy fa azo antoka, mety mieritreritra isika. Izy io dia banky, rehefa dinihina tokoa.
Na izany aza, mijery ny antontan'isa ao amin'ny tranokalan'ny FDIC, nanomboka tamin'ny 2000 ka hatrany am-piandohan'ny 2018, ny banky 555 US dia tsy nahomby. Eny, 555. Aza adino fa ny FDIC dia tsy miantoka ireo mpamatsy vola ho an'ny mizana kaonty manontolo. Ny 250,000 $ voalohany ihany no voasaron'izy ireo voalohany. Izay rehetra ambonin'io vola io dia mety ho lasa "poof" amin'ny rivotra manify rehefa tsy mahomby ny bankinao.
Tsarovy ireo tranga mahatsiravina izay niafara tamin'ny loza tamin'ny Washington Mutual Bank? Izany no Ny tsy fahombiazan'ny banky tamin'ny tantaran'i Etazonia. Indray andro, ireo mpandraharaha dia nihevitra fa tsara daholo ny zava-drehetra. Ny ampitso maraina dia nifoha izy ireo ary nahita fa tsy misy intsony ny bankiny.
Toy izany koa ankehitriny. Mety mifanohitra amin'ny finoana natsangana tamintsika tamin'izy mbola kely. Fa isika rehetra mila mifoha amin'ny zava-misy vaovao.
Famaranana ireo tatitra mitranga any amin'ny Banky Offshore
Rehefa miatrika ireo tranga mampitony ireo dia mitarika antsika amin'ny vahaolana vaovao. Rehefa ny lehibe rehetra bola malahelo tsy misy dikany, raha ny fanamafisana ny tena izy no manome fanazavana an'io fahamarinana io. Tsy heverinao ve fa ilaina ny mitazona farafahakeliny vola amin'ny volanao any ivelany amin'ny fotoana azo antoka kokoa?
Tena hieritreritra an'izany aho. Manentana anareo aho handray andraikitra hanangana kaonty iraisam-pirenena haingana araka izay tratra. Ampiasao ny nomeraon-telefaona or fenoy ny endrika ao amin'ity pejy ity. Nanampy olona an'arivony izahay niaraka tamin'ny filàn'izy ireo banky. Ankoatra izany, nanampy ny olona hiaro ny fananany hatramin'ny 1906 izahay.
Fomba hisafidianana fitsarana
Fahendrena ny mandinika sehatra ara-bola amin'ny lafiny ara-bola, miaraka amin'ny governemanta milamina ary ny orinasa mpamatsy vola maharitra. Ny zavatra ataon'ny olona sy ny mpanao lalàna dia zava-dehibe kokoa noho izay lazainy. Ka raha manana laza momba ny fitoniana ara-bola izy ireo, dia mandeha lavitra ny fahazoana ny fidiram-bolanao.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fiantohana ny volanao dia tsy manakana ny hetra amin'ny haba toy ny nosy Cayman na Hong Kong. Momba ny fahasamihafan'ny harena. The Ny governemanta Amerikana, ohatra, dia tsy miahy loatra raha manana ala ara-bola raha mbola mitatitra ny fidiranao ianao. Ny fametrahana ny orinasa vola dia, amin'ny ankapobeny, ny hetsika tsy misy hetra. Noho izany, tsy mitombo na mihena ny hetra amin'ny ankapobeny. Olona an-tapitrisany no manana kaonty any ivelany ary tsy manipy sainam-pirenena mena izany raha manana iray ihany koa.
Amin'ny fiavian'ny banky an-tserasera, fahaiza-manao an-tariby an-tserasera, banky an-tariby ary carte de debit, tsy dia hafa be noho ny fandanjana vola eny an-dalambe. Fanampin'izany, mahazatra ny mahita banky izay manolotra vidiny avo kokoa, matetika avo kokoa noho ny karaman'ny banky eo an-toerana.
Mieritrereta iT. Avo be ny karama any Etazonia raha oharina amin'ireo firenena hafa. Ravo ny vidin'ny vidin'ny trano. Avo ny hetra. Ny fiantohana ara-pahasalamana amin'ny asa dia amin'ny alàlan'ny tafo. Ireo fandaniana ireo dia mitaky vola be any Etazonia, UK, Canada and hafa firenena lafo kokoa. Raha ny Lany kokoa ny fandaniana ny banky any ivelany, mbola hisy sisa tavela handoa anao, mpanolotra azy.
Fa maninona ny banky amerikana no manafina ny zava-misy?
Ny bankinao eo an-toerana dia mazava ho azy fa tsy hanao dokambarotra amin'ny fahitalavitra milaza aminao fa be dia be ny mahazo anao fihenam-bidy tsara kokoa. Ny banky any ivelany, tsy misy fahazoan-dàlana amin'ny banky an-trano dia tsy afaka hanao dokambarotra ara-dalàna eto an-toerana. Ka ahoana no fahalalanao azy? Tsy holazaina aminao izany matanjaka ny banky any ivelany toy ny banky midina an-dalambe.
Suisse, Germany, Australia, Singapore, Hong Kong ary firenena maro hafa dia manana banky matanjaka sy azo antoka. Ny anao manokana dia manana ny scoop ao anatiny, mifototra amin'ny traikefa an-taonany maro foiben'ny banky any ivelany dia hanokatra kaonty ho an'ny vahiny, manolotra fampiasam-bola mitombo, mahatoky ara-bola, manana serivisy serasera ary mahafinaritra tokoa raha miasa.
Ny volanao - Manampia fanampiana
Tena zava-dehibe ny fananana fitarihana olona manana traikefa amin'ny fametrahana ny kaonty eny ivelany. Izay banky rehetra dia afaka mamolavola tena. Fa misy olona manana traikefa ihany - ary nanangana an'arivony maro izahay kaonty any ivelany - afaka milaza aminao hoe iza no tena mikarakara ireo mpamatsy vola azy. Rehefa dinihina tokoa, ny resinao dia miresaka momba anao ny volanao. Mazava ho azy, mety ho lafo kely io. Angamba tsy dia kely noho ny eritreretinao. Fa tsara kokoa noho ny safidy manimba amin'ny fisafidianana ilay banky diso.
Banky Offshore Account Tips
Ireo mpanome kaonty amin'ny morontsiraka any ivelany dia tsy afaka hanao dokambarotra amin'ny lafiny ara-dalàna. Ankoatr'izay, ny banky an-trano dia mpamatsy vola politika lehibe. Noho izany, misy ny tsy fahampian'ny fampahalalana sy ny diso diso tafahoatra -dranomasina kaonty. Vokatr'izany, ny olona sasany dia manana ny hevi-diso hoe tsy ara-dalàna izany - tena tsy izany mihitsy. Ny sasany mihevitra fa fomba iray handosirana hetra izany - tsy izany. Ny sasany mihevitra fa mampiasa azy io ny mpanao heloka bevava - tsy dia fahita firy izany satria ny banky dia afaka mamela ny fahazoan-dàlana hanaiky ny fivarotana maloto.
Ny marina dia raha avy any Etazonia na ny UK, ohatra, raha toa ianao ka mitatitra ny fidiram-bolanao manerantany dia tsy nihena firy ny governemanta. Hevero fa misy an'arivony tapitrisa dolara manidina isan-taona isaky ny faritanintsika. Araka izany, ny kaontinao dia mety tsy hanao ripple amin'ny radar federaly.
Inona no safidiko?
Misy safidy mahafinaritra vitsivitsy azon'ny olona mitady kaonty any ivelany. Misy -dranomasina banky manokana amin'ny fiarovana avy amin'ny fanarahan-dalàna. Ireo banky hafa dia mikarakara ireo mila kaonty amin'ny fifanakalozana vola be. Ny hafa manokana Fitantanam-bola ho an'ny mpampiasa vola. Misy ihany koa ny banky mankany ivelany bola tsy misy vidiny amin'ny aterineto ho an'ny mpivarotra do-it-anao. Ny sasany dia mila tahiry kely, toy ny $ 2000 US. Ny sasany dia mifantoka amin'ny olona manana harato avo lenta ary mitaky tahiry lehibe, rehefa manokatra kaonty amin'ny banky, $ 250,000 US na mihoatra.
Ny sasany dia mandoa avo indrindra noho ny banky any an-toerana, noho ny trano fandaniam-bola. Ny hafa dia mandoa hetra mitovy amin'ny tsena anatiny. Ny sasany amin'ireo fifehezan'ny toeram-pitsaboana, toy ny Nosy Cook, dia tsy manaiky ny fitsaràna vahiny. Noho izany, raha ampifandraisina amin'ny fahatokisana an-dranomasina izy ireo, dia manolotra ireo izay mitady fiarovana amin'ny fiarovana.
Rehefa mametraka kaonty any ivelany, noho ny fahazotoana sy ny fahalalana-ny mpanjifan-dàlana ho an'ny rehetra. Ireo rafitra momba ny banky izay mamela ny kaonty any amin'ny banky vahiny dia manambola amin'ny fanekena ireo vahiny izay mitady fialana hetra avy amin'ny fireneny. Handinika ny fangatahan-dry zareo koa izy ireo mba hahazoana antoka fa ara-dalàna ny loharanom-bolanao. Noho izany, raha te hanokatra kaonty any ivelany ianao, dia miomàna. Izy ireo dia hitaky anao hanomezana fahafantarana feno momba ny mombamomba anao sy ny fiavianao.
Banky Offshore adiresy avy amin'ny Internet
Ireo banky rehetra dia mitaky anao hanome famantarana tsara. Ny banky sasany dia ahafahanao manome antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny hafa dia mila anao hiseho manokana. Noho ny fifandraisantsika amin'ireo banky marobe eran'izao tontolo izao dia «izahay»azo fidiana introducer”Mba hahafahantsika kaonty misokatra ho an'ny mpanjifa lavitra izay tsy azon'ny olona atao ho azy irery. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny banky any ivelany dia tsy hanokatra kaonty ho an'ny vahoaka amerikana na Canada aza. Fantatsika izay hisokatra kaonty ho an'ny vahiny, ary tsy mila mandeha mivezivezy. Ampiasao ny endrika eto amin'ity pejy ity na ny isa etsy ambony hahazoana valiny fanampiny amin'ny fanontaniana momba ny fitateram-bola any ivelany.